Villa Somalia - War-murtiyeedka Golaha Amniga Qaranka
2.2. Waxaa lagu heshiiyey in la magacaabo guddi farsamo oo ka kooban toban (10) xubnood oo kasoo tala bixin doona Arrimaha Federaalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa si rasmi ah wareegto ugu soo saari doona xubnaha guddiga farsamada iyo waajibaadkooda shaqo.
3.1. Markii shirku dhagaystay war-bixintii Wasiirka Wasaaradda Kalluumaysiga iyo khayraadka Badda lana tixgaliyey baahida deg-degga ah ee loo qabo ka faa'ifaysiga Khayraadka badda: Waxaa la isla qaatay in la saxiixo Heshiis ku-meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga kasoo xarooda Kalluumaysiga inta laga soo dhamaystirayo heshiiska guud ee qaybsiga khayraadka dalka.
Madaxda qaranku waxay isku raaceen in shirka soo socda lagu qabto magaalada Baydhabo 28-ka bisha Maarso, 2018 loogana heshiiyo qaybsiga khayraadka oo dhammaystiran, iyo hannaanka doorasho ee uu dalku qaadanayo sannadka 2020-ka. Madaxda qaranku waxaa kale oo ay isku raaceen in la dardar geliyo go'aan ka gaarista arriaha masiiriga ah ee horyaalla sida, awood qaybsiga, hannaanka garsoorka federaaliga ah, midaynta hannaanka dakhliga, nidaamka dawladeed ee dalku yeelanayo iyo maqaamka caasimadda Muqdisho.